IGoogle Earth ikhombisa idatha yokungcola komoya | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ukungcola kungenye yezinkinga ezinkulu kakhulu ezidalwa isintu, ikakhulukazi thina esihlala emazweni abizwa ngokuthi "amazwe athuthukile". Impela ufunde lokhu kaningi, kepha wake wazibuza ukuthi amadolobha angcolisa malini?
Manje, I-Google Earth isinikeza imininingwane ngokungcoliswa komoya sibonga isivumelwano esenziwe nenkampani i-Aclima.
I-Google kusukela ekuqaleni kwayo yathuthukisa izinhlelo zokusebenza ukuze ithuthukise ulwazi lomsebenzisi. Ubufakazi balokhu yiGoogle Maps, lapho ungafinyelela khona kalula lapho uya khona, isiphequluli seGoogle okulula kakhulu ukusisebenzisa, futhi kunjalo neGoogle Earth, uhlelo lokusebenza olukuvumela ukuthola noma yiliphi idolobha noma idolobha emhlabeni. Kanjalo, futhi ifuna ukusiza ukuqwashisa ngokungcoliswa esikukhiqiza nsuku zonke.
Yize okwamanje kukhawulelwe eSan Francisco, itheku, indawo emaphakathi yesigodi neLos Angeles, futhi yize isesigabeni sokuhlola, inhloso ukukwazi ukusebenza njengendlela yokulindela izimo ezingcolisa zosuku, kanye funda izakhi zokungcola bese uzilungisa. Ngokwesibonelo, kukhombisa ukuthi imigwaqo emikhulu evinjwe ithrafikhi nethrafikhi emigwaqweni yasendaweni nasedolobheni inethonya emaphethini endawo angcolisayo emoyeni.
Okwamanje, ukufinyelela kwimininingwane kuvaliwe, kepha labo abaphenya ukungcola komoya bangacela ukufinyelela kuyo ngokugcwalisa ifomu. Kuze kube manje, inkampani ingene ngaphezulu kwamaphuzu wedatha yekhwalithi yomoya ayi-XNUMX billionkepha ngokuzayo kungenzeka ibe ngumthombo onokwethenjelwa wedatha yokungcola kwesikhathi sangempela.
Ucabangani ngesilingo esisha se-Google? Ngabe ucabanga ukuthi kuzoba wusizo ngempela?
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » IVIDIYO: IGoogle Earth ikhombisa idatha yokungcola komoya
Inyanga ka-Okthoba ibe ngeyesibili ngokufudumele kusukela ngo-1965